Barlamanka jarmalka oo ka doodaya heshiiska xukuumadda Jarmalka la gashay dowladda sucuudiga – SBC
Barlamanka jarmalka oo ka doodaya heshiiska xukuumadda Jarmalka la gashay dowladda sucuudiga
Berlin:- Barlamanka Jarmalka ayaa ka doodaya qorshaha deg dega ee looga iibinayo boqortooyada sucuudiga 200 oo dabaabadood, inkastoo siyaasadda jarmalka ay kamid tahay in aan hub laga iibin dowladaha lagu tilmaamo in ay shacabkooda caburiyaan.
Wargeyska Dir Shubaygal ee ka soo baxa magaalada Berlin ayaa qoray in golaha amaanka federaalka jarmalka oo ka kooban Angel Markel iyo qaar kamid ah wasiirada ay ogolaadeen in boqolaal dabaabadood laga iibiyo dowladda sucuudiga.
Ilo xog ogaal ah aaa ku waramaya in xukuumadda Jarmalka ay arrintaan u bandhigtay Israel iyo mareykanka balse waa ay ku waafaqeen.
mucaacaaradka Jarmalka ayaa cambaareeyey talaabadan xukuumadda jarmalka ay kaga iibisay 200 oo dabaabadaha dagaalka dowladda Sucuudiga.
Mucaaradka ayaa ka codsaday barlamanka in ay arrintaan dood ka yeeshaan.
Mid kamid Hogaamiyaasha xisbiga deegaanka oo lagu magcaabo Yuurgan ayaa sheegay in aysan suuragal ahayn in dowladda jarmalku ay qaadato talaabadan xilli shacabka ku nool dunida carabtu ay u mudaaharaadayaan in ay helaan xorriyad.
Robert Bolnitis oo xubin ka ah xisbiga masiixiga dimuqaraadiga ayaa ku tilmaamay in heshiiskan uu ka hor imanayo xeerka ah dowladaha shacabkooda caburinta ku haya in aanan hub loo dhoofin Karin.